Njikọ dị n'otu na ọganihu nke ụlọ ọrụ anyị na Vietnam
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị ahịa na-echegbu onwe ha banyere mmepe nke ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị na Vietnam ma dee ọtụtụ oge ịjụ maka ọganihu. Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ọrịa COVID-19, oge owuwu nke Vie ...
Dika onodu nwere atumatu ulo ndi otu mara mma, Beajom weputara uzo ahia na ndi injinia oru na atumatu oru na oge mgbụsị akwụkwọ 2020 nke oge ngụsị akwụkwọ nke mahadum na 16th Ọkt 2020 na Mahadum Jiaxing. Ihe karịrị 600 ọkachamara ụmụ akwụkwọ f ...
Site na ọganihu nke oge na mmepe nke sayensị na teknụzụ ……
Site n'ọganihu nke oge na mmepe nke sayensị na teknụzụ, mkpa ndị mmadụ maka akwa amalitela ịgbanwe, site na akwa akwa mbụ na akwa-mmiri na akwa akwa. Akwa ụra dị mma bụ akwa nke na-eji nchikota ọtụtụ bọọdụ ndina iji gbanwee ịdị elu nke ...
Foto Site n'aka ụlọ ọrụ Sirius Ding Tokyo Mr.Tanaka kwadoro Beajom maka ọnwa ole na ole ugbu a. Anyị mbupụ mgbanwe isi na kwekọrọ ekwekọ matarasị ka North East Asia ahịa na-mgbe niile na-abawanye 23% elu YOY. Mana nke ikpe COVID-19 jidere, Maazị Tanaka kwugharịrị ọzọ ileta anyị ...